Mogadishu Journal » 2018 » October » 7
Mjournal :-Warbaahinada taageera ururka Al-Shabaab ayaa daabacay soona bandhigay sawiro muujinaya dad loo qeybinayo lacago zako ah kuwaasoo la sheegay inay ku nool yihiin magaalada Muqdisho. Qoraalka ayaa lagu sheegay in qeybinta lacagaha zakada ay ka qeybgaleen madax sarsare oo...
Shabaab oo sheegtay inay qarax ku dileen askar ka tirsan ciidanka dowladda
Mjournal :-Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay inay qarax la heleen gaari ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomalaiya oo ku socdaalayay agagaarka degaanka Jaziira ee duleedka Muqdisho. Waxay sheegteen Shabaab weerarkaasi inay ku dileen ilaa Shan askari oo ka tirsanaa...
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka Ingiriiska ee arrimaha Afrika, Harriett Baldwin, oo Muqdisho ku timid socdaakii ugu horreeyay. Ra’iisul wasaare Khayre iyo wasiir Harriett Baldwin ayaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjireyaasha cusub ee dalalka Faransiiska iyo Jarmalka oo baddalaya danjireyaashii hore ee dalalkaas u joogay Soomaaliya. Danjiraha Dalka Faransiisk...
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay wefti ballaaRan oo ka socda dalka Ingiriiska oo ay hoggaaminayso wasiiru-dawlaha dalka Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Afrika, ahna madaxa hay’adda horumarinta caalamiga ah ee DFID....
Mjournal :-Wasiirka wasaarada qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ku guulaystay doorashada kursi ka banaan Golaha Shacabka oo maanta ka dhacday Magaalada Garoowe. Wasiir Jamaal ayaa helay codad gaaraya 49 cod, maanta laga bilaabo waxa uu si rasmi ah kaga mid noqday...
Immisa Lacag Ayey Koox Walba Ka Heli Doontaa Koobka UEFA Champions League?
Mjournal :-Koobka horyaalada yurub ayaa bilaaban doona, habeen dambe ayaa qaar ka mid ah garoomada yurub laga baasan doonaa, sidaas darteed waxaa faah-faahin laga bixiyay qiimaha lacageed oo ay koox walba ka heli doonto tartankaan. Xiriirka qaaradda yurub ee UEFA ayaa sare u...
Ku dhawaad 50 qof oo ku dhimatay Shil Gaari
Mjournal :-Inta la xaqiijiyay ku dhawaad 50 qof ayaa ku dhimatay kadib markii gaari wayn oo nooca shidaalka qaada ah uu ku dhacay gaari kale oo marayey waddo wayn oo marta galbeedka Jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo. Sidda ay sheegeen Mas’uuliyiinta Shilka ayaa ka dhacay...
Garowe oo lagu qabanayo maanta doorashada Kursi ka banaan Golaha Shacabka
Mjournal :-Magaalada Garowe ee Caasimadda maamulka Puntland ayaa maanta lagu waddaa in lagu qabto doorashadda kursi ka banaan Golaha Shacabka,kaasoo dhawaan uu iska casilay xildhibaan ka tirsanaa Golaha Shacabka. Kursiggaan ayaa waxaa Iska casilay Dahar Cali Faarax ka dib markii...
Mjournal :-Ka dib markii dhawaan dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay sameysay Manhaj cusub looga tala galay in laga hirgaliyo dugsiyadda Waxbarashadda ee Soomaaliya ayaa arintaasi waxaa digniin kasoo saaray Al-Shabaab. Sheekh Cali Dheere Afhayeenka Al-Shabaab ayaa sheegay...